Mpanamboatra sy mpamatsy fosfosa China Tricresyl | Fortune
Tricresyl Phosphate dia singa simika miaraka amina molekiola CH21H21O4P (CH3C6H4O) 3PO.
Ny Tricresyl Phosphate dia ranoka misy menaka mangarahara tsy misy loko na mavo. Tsy misy fofona, milamina ary tsy miovaova io. Izy io dia manana faharetana mirehitra plastika tsara, fanoherana solika, insulation elektrika ary fanodinana mora. Ny Tricresyl Phosphate dia tsy levona anaty rano ary mety levona amin'ny solvents organika toy ny benzene, alcohols, etera, menaka legioma, menaka mineraly. Ity vokatra ity dia plastika manan-danja amin'ny resin vinyl sy ny nitrocellulose. Ampiasaina amin'ny loko izy io hampitomboana ny fahafaha-mihetsika amin'ny sarimihetsika loko. Izy io dia manana mifanentana tsara indrindra ary ny fingotra sentetika, polyvinyl chloride, polyester, polyolefin ary malefaka. Tsy mahazaka lelafo ny volon'ny polyurethane. Ny Tricresyl Phosphate dia afaka manome ny polymer fanoherana tsara, fanoherana ny toetr'andro, fanoherana ny ahitra, fanoherana ny taratra ary ny fananana elektrika. Izy io koa dia azo ampiasaina ho toy ny menaka manitra, menaka fanosotra, ary menaka hydraulic. Tricresyl Phosphate dia mihatsara amin'ny alàlan'ny dingana vaovao ary an'ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy "fako telo" amin'ny fizotry ny famokarana, ary ambany ny poizina ny vokatra.
Tricresyl Phosphate dia plastika indrindra ary manana fiaretana afo tsara. Izy io dia misy ny fanoherana ny ahitra, ny fanoherana ny akanjo, ary ny fiovaovan'ny toetr'andro ary ny fahombiazan'ny herinaratra. Ampiasaina indrindra amin'ny fitaovana tariby PVC izy io; Hoditra artifisialy; Fehikibo mihetsika; Takelaka manify; Fitaovana amin'ny tany, sns .. Azo ampiasaina amin'ny neoprene koa izy io, ampiasaina ho plastika sy preservativa amin'ny fibre viscose. Ny vokatra dia misy poizina, misy fiantraikany poizina amin'ny rafi-pitabatabana afovoany, ary tsy azo ampiasaina amin'ny fitaovan'ny fonosana sakafo sy fanafody. nonon'ny; Kilalao an'ny ankizy, sns
Miaraka amin'ny fakan-kevitra momba ny vidin'ny trosresyl phosphate, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, anisan'ireo mpanamboatra trosresyl phosphate tsara indrindra any Shina, dia miandry anao hividy 1330-78-5 betsaka indrindra, ny TCP no hanangana ny orinasa.
1 、 Formula ： (CH3C6H4O) 3PO 2 、 Lanjan'ny molekiola ： 368 3 、 CAS NO. 1330-78-54、Specification manampyAppearance kelyClear fluidFlash point ： 225 ℃ minAcid Value （mgKOH / g） ： 0,1 maxFree Phenol ： 0,1% MaxColor Value (APHA): 80 max Water Content: 0.1% gravité maxspecific (20 ℃): 1.16-1.185 、 Fampiharana ： Ampiasaina hanatsarana ny fanoherana ny abrasion an'ny menaka fanosorana, ireo mpamono afo ao amin'ny PVC, polyethylene, fehikibo conveyor, fingotra voajanahary na voajanahary , tariby, sns.6 、 Fonosana ： 230KG / amponga vy ， 18.4tons / FCL。 Mampidi-doza ity vokatra ity: UN 2574, Kilasy: 6.1
Miaraka amin'ny fakan-kevitra momba ny vidin'ny trosresyl phosphate, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, anisan'ireo mpanamboatra sy mpamatsy fosfôly tricresyl any Shina, dia miandry anao hividy hividianana fosfat tricresyl betsaka indrindra hanangana ny orinasa ao aminy.